Ciidamada Ammaanka magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari ayaa soo bandhigay Rag loo haysto Dil iyo Kufsi Magaaladaasi loogu geystay Gabadh yar+(SAWIRRO). | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidamada Ammaanka magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari ayaa soo bandhigay Rag loo...
Ciidamada Ammaanka magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari ayaa soo bandhigay Rag loo haysto Dil iyo Kufsi Magaaladaasi loogu geystay Gabadh yar+(SAWIRRO).
Taliska Booliska Gobalka Bari ee Maamulka Puntland ayaa shaaciyay in gacanta lagu dhigay labo rag ah oo qirtay dilka Gabar Yar oo lagu magacaabi jiray Marxuumad Naciimo Cabdi Maxamed oo 24-10 laga helay meydkeeda Xaafada Raf & Raaxo ee duleedka Magaalada Bosaaso.
War kasoo baxay Taliska Booliska Gobolka Bari ayaa waxaa lagu sheegay in baaritaano socday muddo oo ay ka qeyb qaateen Ciidamada booliska gobalka bari iyo laamaha kala duwan ee danbi baarista ay u suurta gashay in ay gacanta ku soo dhigaan ragii ka danbeeyay falkaas lagula kacay gabadha, kuwaas oo ku dhuumalesanayay Bariga Magaalada Boosaaso.
Labada Nin ee loo xiray kufsiga Gabadha Yar oo Warbaahinta la hadlay ayaa waxaa ay qirteen inay kufsi u geysteen Gabadha, kaddibna ay Ceejo ku dileen, iyagoo u adeegsaday Cimaamad.
Xeer Ilaaliyaha Maxkamadda Gobolka Bari ayaa sheegay in raggan qiray falka kufsiga iyo dilka Marxuumad Naciimo Cabdi Maxamed Maanta oo arbaco ah Maxkamadda Gobolka Bari la soo taagi doono si ay Cadaalad u marsiiso.
Waxaa uu ugu baaqay Bulshada Gobolka Bari in cid kasta oo dhibaato u geysaneysa Shacabka ay Ciidamada kusoo wargeliyaan kalana Shaqeeyaan sidii looga hoortegi lahaa dhibaatada.
Taliyaha qeybta Booliska Gobolka Bari G/Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa dhankiisa u mahad celiyay Ciidamada & Bulshada Magaalada Boosaaso oo iska kaashada sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa ragga kufsiiga & dilka u geystay Gabadha Yar oo 14 jirka aheyd.
Degaano ka tirsan Bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa Dhawaanahan kusoo badanay falalka kufsiga & dilka ah ee loo geysanayo Gabdhaha Yar yar, waxaana jira dad badan oo loo xiray falalkaas.
Previous articleWasiirka Haweenka JFS oo kulan la qaadatay Madaxa Qaramada Midoobay ee Arrimaha Haweenka+(SAWIRRO).
Next articleDoorashada guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle oo maanta lagu wado in ay ka dhacdo Jowhar.